လတ်တလော မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးများအပေါ် ဆရာလူထုစိန်ဝင်းအမြင်ကို သည်ဗွီုက်ဂျာနယ် ပြန်လည်တုန်ပြန်ခြင်း | အံ့ဘုန်းမြတ်
Posted by ahuntphonemyat ⋅ September 19, 2009	⋅ 10 Comments
ကျွန်တော်အနေဖြင့် ဒီလို ဆရာလူထုစိန်ဝင်းနှင့် အင်တာဗျူးလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရပ်တည်ချက်ကိုလည်း ပြောပြထားချင်ပါတယ်။ ဒီလိုပါ လူတစ်ဦးချင်းတစ်ယောက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ အုပ်စု တစ်စု၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ မတူကွဲပြားခြားနားတဲ့ အမြင်အမျိုးမျိုးရှိတက်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အမျိုးအမျိုးကွဲပြားခြား နားလျှက် ရှိတဲ့အမြင်တွေကို ထုတ်ဖော်ပေးခြင်းသည်သာ သတင်းသမားတို့၏ အခန်းကဏ္ဍလို့ ပထမဆုံး ခက်လွယ်လွယ် ရှု့မြင်သုံးသပ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လူငယ်တွေဖြစ်တာကြောင့် နိုင်ငံတော် (state) နဲ့ အစိုးရ (Goverment) ခွဲခြားရှုမြင်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမှန်တရားတစ်ခုအတွက် သစ္စာတရားကို စွန့်လွှတ်ရမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော် (state) အတွက်သာ စွန့်လွှတ်နိုင်ပါ့မယ်။ အစိုးရ (Goverment) အတွက်တော့ စွန့်လွှတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာ (၂၁) ရာစု မြန်မာလူငယ်တွေ လက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ခုလို ပြောချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရ လို့ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေတဲ့အပေါ်မှာလည်း ခွဲခြားရှုမြင်တက်တဲ့ မျိုးဆက်လည်းဖြစ်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စကားများများပြောဖို့လိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ အကောင်းဆုံးပါဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ခုကိုပဲ တစ်ဘက်ပိတ်ပြောဆိုမနေ ပဲ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ နားလည်လက်ခံမှုမျိုးကို လိုလားတောင့်တတဲ့ မျိုးဆက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ဖြစ်ရေး လမ်းစဉ်ထက် သာလွန်ကောင်မွန်ရေးလမ်းစဉ် ကို လိုလားတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ပြောချင်ပါတယ်။
Journalist.	View all posts by ahuntphonemyat »	« ဂျာနယ်အချို့မှာ ဖော်ပြခွင့်ရရှိနေတဲ့ လတ်တလောမြန်မာ့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးတွေအပေါ် ၀ါရင့်သတင်းစာဆရာကြီး ဆရာလူထုစိန်ဝင်း အမြင်
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ရေးသူအတွေး ဖတ်သူအမြင် »
Posted by ကိုနိုင် | September 19, 2009, 8:38 am လူထုစိန်ဝင်းကခေတ်မမှီတော့ပါ..NGO တွေကိုပုတ်ခတ်လိုက်..ဟိုလိုလို..ဒီလိုလိုနဲ့ ပွဲဆူအောင်လုပ်နေတာပါ…
Posted by Old Journalsit | September 19, 2009, 4:09 pm Sein Win is now too old to understand the current Political situations. He is onlyastereotyping man.
Posted by Blue River | September 20, 2009, 12:38 am Younger Journalist like you should more study on changing pattern of the collapsing of old ideas.
Posted by Blue River | September 20, 2009, 12:42 am သူငယ်ချင်းရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို သဘောကျပါတယ်။ ဆက်လုပ်ပါဗျာ။ အတွေးအခေါ် အမြော်အမြင်ရှိတဲ့၊ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ချင်တဲ့ လူငယ်တွေ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် အများကြီးလိုနေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုးစားနေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လို ဘလော့ဂ့်ကောင်းကောင်းတစ်ခုလည်း ဖန်တီးဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ နောက်လည်းလာဖတ်ပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တော့ Voice ကို သူငယ်ချင်းတွေဆီက PDF File ပို့ပေးလို့ ရတဲ့အခါတိုင်း သေချာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်မင်စွာဖြင့်
Posted by lonetone | September 20, 2009, 3:36 am Voice Journal PDF file များ ပို့ပေးလို့ရရင်လည်း လိုချင်ကြောင်း မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ မိတ်ဆွေများက တတ်အားသရွေ့ ပို့ပေးပေမယ့် ပုံမှန်မရလို့ပါ။
Posted by lonetone | September 20, 2009, 3:40 am Here isanice response on U Sein Win and Aung Thu Nyein’s points. http://drlunswe.blogspot.com/2009/09/blog-post_1033.html
Posted by PPP | September 20, 2009, 6:13 pm ပထမဆုံးပြောချင်တာက အတိုက်အခံနိုင်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ သူတို့ကိုအားပေးတဲ့ မီဒီယာတွေကို The Voice က Watch Dog လို့သုံးလိုက်တာဟာတော်တော်လေးခံပျင်းစရာကောင်းပါတယ်။ သံသယဖြင့်စောင့်ကြည့်သူ (Watch Dog) လို့သုံးထားပေမဲ့ သံသယဖြင့်စောင့်နေတဲ့ခွေး မိမိသခင်ရဲ့စီးပွားကို ကာကွယ်တဲ့သူ တစ်နည်းအားဖြင့် သခင်အားရကျွန်ပါးဝပေါ့ အဲဒီစကားကိုအဓိပါယ်ဖွင့် ကြည့်ရင် ဘယ်သူက သခင်အာရကျွန်ပါးဝလုပ်နေတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ရင်အဖြေကရှင်းလေးလေးပါ ဘယ်ဒီမိုကရေစီသမားမှ သခင်အကြိုက်လိုက်ပြီး ဟောင်နေတဲ့ခွေးမျိုးမရှိပါဘူး။ ပြည်တွင်းက မီဒီယာအရေခြုံပြီး အစိုရကြိုက်လုံးတွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ သူတို့ကိုအားပေးတဲ့ မီဒီယာတွေကို တိုက်ခိုက်နေသူတွေကသာ မဲမဲမြင်ရင်ဟောင်နေတဲ့ သံသယနဲ့စောင့်နေတဲ့ ခွေးတွေနဲ့တူနေပါတယ်။
လို့ The Voice ကဆိုပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင်ခံယူချက်မယ်မယ်ရရမရှိတဲ့ နိုင်ရေးသမားတစ်ဦးရဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်သလို ဖြစ်သမျှအကောင်းပဲလို့ တွေးနေတတ်တဲ့ခံယူချက်ပီပီပြင်ပြင်မရှိတဲ့ ယောင်ဝါးဝါးလူတွေရဲ့ အတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်ပါ။
ယခုရွေးကောက်ပွဲဟာ စစ်မှန်တဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးဟုတ်ပါရဲ့လား စဉ်းစာစရာပါ။ နအဖ အစိုးကသာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို တကယ်ပဲလိုလားခဲ့ရင် သူတို့ကိုအတိုက်ခံလုပ်တဲ့ သူတွေကို လွတ်လပ်စွာမဲဆွယ်ခွင့် စည်းရုံးခွင့်ပေးရမှာပေါ့။ အခုတော့ မြန်မာပြည်သူတွေ လက်ခံတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကို မလှုပ်နိုင်အောင်ချုပ်ထားပြီး ဘယ်သူကသူတို့ရဲ့လက်ဝေခံ ရုပ်သေးအစိုးရဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာ နအဖ က စောင့်ကြည့်ပြီး နိုင်ငံရေးပြဇာတ်ကိုကြိုတင်ပြီးဇာတ်ညွှန်ခွဲနေတာပါ။ ဒါကိုလည်း The Voice ကအယ်ဒီတာမင်းများသိကြမှာပါ။ တကယ်တော့ နိုင်ငံရေးသဘောကွဲလွဲခွင့်ဆိုတာ ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးမှာမဆိုရှိသင့်တဲ့ကိစပါ
Posted by lady philosopher | September 23, 2009, 8:09 am ကိုနေ၀င်းမောင် အနေနဲ့ Watch dog လို့သုံးလိုက်တဲ့ နေရာမှာ watch ထက် dog ကို ပိုအသားပေးခြင်သလား သံသယ ဖြစ်မိပါတယ်။ Watchdog သို့မဟုတ် Watch-dog လို့ရေးသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ ကိုအောင်သူငြိမ်း နဲ့ ကိုငြိမ်းချမ်းတို့ရဲ့ ပြန်လည် ဆွေးနွေးချက်တွေ မြန်မာပြည်က မီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြခွင့်ရရင် ကောင်းမှာပဲ ထင်မိတယ်။ ကို lonetone ဖတ်ချင်ရင် Voice Weekly ကို Witmone ဆိုတဲ့ ဘလော့ (www.witmone.blogspot.com )မှာ ပုံမှန် တင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
Posted by Ko Htay | September 26, 2009, 11:33 am နိုင်ငံရေးအာဏာသည် သေနတ်ပြောင်းဝတွင်တည်သည် ဆိုသော အယူအဆ၊ နိုင်ငံသားများသည် ၄င်းတို့နှင့် ထိုက်တန်သော အစိုးရတစ်ရပ်ကိုသာရရှိကြသည်ဆိုသော အယူအဆများသည် ယဉ်ကျေးသောလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် အံဝင်ဂွင်ကျမရှိကြတော့ပေ ပြည်သူလူထု၏ အခန်းကဏ္ဍကိုအလေးထားသိမြင်ကြသည့် လူ့အဖွဲအစည်းများတွင် ကိုယ်ကြမာကိုယ်ဖန်တီနိုင်သည့် နိုင်ငံရေးစနစ်များထွန်းကားလျှက်ရှိသည်ကို အထင်းသားတွေမြင်နိုင်ကြပါသည်။
သတင်းစာဆရာကြီးနှင့် DVB တို့၏ Interview ကိုလေ့လာရတွင် The Voice Weekly ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ဦးသန့်မြင့်ဦးနှင့် မစွတာဂျင်ဝတ်တို့ကို လည်းကောင်းထိုက်ခိုက်စွတ်စွဲသည့် အဓိပါယ်ပေါ်လွင်မှု မရှိဟုယူဆပါသည်။ ပြည်တွင်းဖြစ်သည့် media အတော်များများတွင်မှု သတင်းစာဆရာကြီးပြောကြားသကဲ့သို့ရေးသားထုတ်လွင့် တင်ပြချက်များကို တွေရှိနေရသည်မှာငြင်းကွယ်ရ်ျ မရနိုင်ပေ။ ယင်းပုဂိုလ်များကိုသာ သတင်းစာဆရာကြီးရည်ညွှန်းဟန်ရှိပါသည်။ မြန်မာစာနှင့် မြန်မာစကား၏ အနက်အဓိပါယ်ကိုလည်းသဘောပေါက်သင့်ပါသည်။
Posted by အညတရ အစိုးရ၀န်ထမ်းဟောင်းတစ်ဦး | September 28, 2009, 12:19 pm LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...